विश्वको अनौठो परम्परा आमा छोरी दुबैसँग शारीरिक सम्पर्क, जान्नुहोस अरु के के गर्छन् ? - OneZero News
विश्वको अनौठो परम्परा आमा छोरी दुबैसँग शारीरिक सम्पर्क, जान्नुहोस अरु के के गर्छन् ?
देशमा आमाछोरीसँग बाुबले र ज्वाईले सासु र श्रीमतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई त्यहाँ परम्परा नै मानिन्छ ।
हरेक देशमा यौनका बारेमा आ–आफ्ना मान्यता, धारणा, परम्परा तथा कानून छन् । कहीँ सेक्सको विषयमा समाज निकै खुला हुन्छ भने कतिपय देशमा यो विषयमा समाज र कानुन नै निकै कडा हुन्छ ।
अझ केही देशले सेक्सको विषयमा केही त्यस्ता परम्परागत नियम कानुन बनाएका हुन्छन् जुन सुन्दा नै तपाइँहामीलाई हाँसो उठ्छ । यी मध्ये धेरै कानुन त्यहाँका परम्परागत कानुन हुन् र अहिले ती आउटडेटेड भैसकेका छन् । तरपनि यी कानुन वा सामाजिक परम्परा सुन्दा नै अचम्म मान्ने खालका छन् ।
सेक्सका यी अनौठा ८ नियम स्
५) केही मध्यपूर्वी देशहरुमा एक स्लामिक कानुन विद्यमान छ, जस अनुसार यदि कोइ पुरुषले भेडासँग सेक्स गरेको फेला परेमा उसलाई सजायँको रुपमा भेडाकै मासु खुवाइन्छ ।
८) भर्जिनियाको रोम्बोचमा सेक्सका बेला बत्ती बाल्नु गैरकानुनी रहेको छ ।